Qaramada midoobay oo sheegtay in doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka la qabanayo bisha 8aad
Posted by admin on April 13 2011 20:31:17
Kenya:(hiranstate.com)-Shirka Kenya oo intii uu socday loogu yeerayey magacyo ay ka mid yahiin ujeedo badan, Dhalanteed iwm, halka qaramada midoobayna ugu yertay wadatashi ayaa ugu danbeyn laga soo saaray dhawr qodob inkastoo labo qodob oo kaliya laga soo qaatay oo aan qodobadii kale si waadax ah loo soo bandhigin iyo Gudoomiyaha baarlamaanka oo maalinat jimcaha dib ugu laabanayo Mogdisho.
Kenya:(hiranstate.com)-Shirkii wadatashiga ayaa ugu danbeyn leysku raacay in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka waqtigii ay horey ugu talo gashay qaramada midoobay oo aheyd inuu dhaco bisha 8aad ee inagu soo aadan.
Inkasta oo ay shirkani diiday iney ka qeyb gasho TFGda hadane qodobada la shaaciyey ma aheyn kuwo ku cusub dhegaha shacabka Somaliyeed oo horey ayey u ogaayeen muhiimadu waxey aheyd in halkaasi dhawr million oo qarash ah lagu galo halka ay shacabkii Somaliyeed gaajo iyo haraad u dhamaanayaan.
war hada inaga soo gaarayo madasha shirka ayaa sheegaya in gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Hasan iyo xildhibaanada la socda ay ka dhoofayaan halkaasi isla maalinta jimcaha si uu uga hor tago amaba uga qanciyo mad madow soo kala dhex galay isaga qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Somaliya oo siweyn ugu soo horjeeday in laga qeyb galo shirkaasi mar hadii ay diiday xukumada Somaliya.
Somalidu been waa sheegtaa laakinse run bey ku maah maahdaa, waxeyna horey u yiraahdeen biyo sacabadaadaa looga oon baxaa hadii aad si wanaagsan u dhuuxdo murtida ereyadaasi waxey kuu tilmaameysaa in shir ay gadaal ka fadhiyaan dad aan Somali aheyn aan lagu najaxeyn waxkasta oo ka soo baxa marka Somalida ayaa loo qaatay iney aayaheeda ka tashado.
Shaki kuma jiro in doorashadu dhaceyso sanadkani aynu ku jirno dhexdiisa amaba dowladu ha is qilaafto ama ha heshiiso, waa go,aanka kama danbeysta ah ee beesha caalamka u degsan hada ileen talada ugu sareysa xiligii ay Somalidu iyadu laheyd laguma jiree.